1 Ndị Kọrịnt 7:1-40
7 N’ihe banyere ihe ndị ahụ unu dere maka ha, ọ dị mma ka nwoke ghara ibitụ+ nwaanyị aka; 2 ma, ebe ọ bụ na ịkwa iko+ zuru ebe niile, ka nwoke ọ bụla nwee nwunye nke ya,+ ka nwaanyị ọ bụla nweekwa di nke ya. 3 Ka di na-enye nwunye ya ihe ruuru ya;+ ka nwunye na-emekwara di ya otú ahụ.+ 4 Ọ bụghị nwunye na-achị ahụ́ ya, kama ọ bụ di ya;+ otú ahụkwa, ọ bụghị di na-achị ahụ́ ya, kama ọ bụ nwunye ya.+ 5 Unu ajụla inye ya ibe unu,+ ọ gwụla ma ùnu kwekọrịtara maka oge a kara aka,+ ka unu wee tinye oge n’ikpe ekpere wee nọkọọ ọzọ, ka Setan wee ghara ịnọ na-anwa unu ọnwụnwa+ maka na unu enweghị ike ịchịkwa onwe unu.+ 6 Otú ọ dị, ana m ekwu ihe a iji nye unu ohere,+ ọ bụghị iji nye unu iwu.+ 7 Ma ọ dị m ka ya bụrụ na mmadụ niile dị ka mụ onwe m dị.+ Otú o sina dị, onye ọ bụla nwere onyinye nke Chineke nyere ya+, otu onye n’ụzọ a, onye ọzọ n’ụzọ ọzọ. 8 M na-agwa ndị na-alụghị di ma ọ bụ nwunye+ na ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ, na ọ dịrị ha mma ịnọ otú a m nọ.+ 9 Ma ọ bụrụ na ha enweghị njide onwe onye,+ ka ha lụọ di ma ọ bụ nwunye, n’ihi na ọ ka mma ịlụ di ma ọ bụ nwunye+ kama ịbụ onye agụụ mmekọahụ na-agụgbu.+ 10 Ana m enye ndị lụrụ di na nwunye ntụziaka, ma ọ bụghị m, kama ọ bụ Onyenwe anyị,+ na nwunye ekwesịghị ịhapụ di ya;+ 11 ma ọ bụrụ na ọ hapụ ya n’ezie, ya nọrọ n’alụghị di, ma ọ́ bụghị otú ahụ, ka ya na di ya kpezie; di ekwesịghịkwa ịhapụ nwunye ya. 12 Ma ana m agwa ndị ọzọ, ee, mụ onwe m, ọ bụghị Onyenwe anyị,+ sị: Ọ bụrụ na nwanna ọ bụla nwere nwunye na-ekweghị ekwe, ma nwaanyị ahụ ekweta ka ya na ya biri, ka ọ ghara ịhapụ ya; 13 nwaanyị nke nwere di na-ekweghị ekwe, ma nwoke ahụ ekweta ka ya na ya biri, ka ọ ghara ịhapụ di ya. 14 N’ihi na e dowo di ahụ na-ekweghị ekwe nsọ n’ihi nwunye ya, e dowokwa nwunye ahụ na-ekweghị ekwe nsọ n’ihi nwanna ahụ; ma ọ́ bụghị ya, ụmụ unu ga-abụ ndị na-adịghị ọcha+ n’ezie, ma ugbu a, ha dị nsọ.+ 15 Ma ọ bụrụ na onye ahụ nke na-ekweghị ekwe chọrọ ịpụ,+ ya pụwa; nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị anọghị n’agbụ n’ọnọdụ dị otú ahụ, kama Chineke akpọwo unu ka unu nwee udo.+ 16 N’ihi na, gị nwunye, olee otú i si mara na ị gaghị azọpụta di gị?+ Ma ọ bụ, gị di, olee otú i si mara na ị gaghị azọpụta nwunye gị?+ 17 Naanị ka onye ọ bụla na-eje ije otú Chineke si kpọọ ya,+ dị ka Jehova nyere onye ọ bụla òkè+ nke ya. Otú a kwa ka m na-enye iwu+ n’ọgbakọ niile. 18 Ọ̀ dị onye a kpọrọ mgbe e biworo ya úgwù?+ Ya aghọla onye a na-ebighị úgwù. Ọ̀ dị onye a kpọrọ mgbe a na-ebibeghị ya úgwù?+ Ya ekwela ka e bie ya úgwù.+ 19 Ibi úgwù+ apụtaghị ihe ọ bụla, ebighị úgwù+ apụtaghịkwa ihe ọ bụla, kama ọ bụ ime ihe Chineke nyere n’iwu nwere ihe ọ pụtara.+ 20 N’ọnọdụ ọ bụla onye ọ bụla nọ mgbe a kpọrọ ya,+ ya nọgide na ya.+ 21 À kpọrọ gị mgbe ị bụ ohu? Echegbula onwe gị+ n’ihi ya; ma ọ bụrụkwa na ị pụrụ inwere onwe gị, ọ dị mma ka i jiri ohere ahụ mee ihe. 22 N’ihi na onye ọ bụla nke nọ n’ime Onyenwe anyị, nke a kpọrọ mgbe ọ bụ ohu, aghọọla onye nweere onwe ya wee bụrụ nke Onyenwe anyị;+ otú ahụkwa, onye a kpọrọ mgbe ọ bụ onye nweere onwe ya+ bụ ohu+ nke Kraịst. 23 E ji ihe dị oké ọnụ ahịa zụta unu;+ kwụsịnụ ịbụ ohu+ mmadụ. 24 Ụmụnna m, n’ọnọdụ ọ bụla+ a kpọrọ onye nke ọ bụla, ya nọgide na ya, ná mmekọrịta ya na Chineke. 25 N’ihe banyere ndị na-amaghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị, enweghị m iwu ọ bụla nke si n’aka Onyenwe anyị, ma m na-ekwu uche m+ dị ka onye Onyenwe anyị+ meere ebere ịbụ onye kwesịrị ntụkwasị obi.+ 26 Ya mere, echere m na nke a dị mma n’ihi mkpa anyị nwere ugbu a, na ọ dị mma ka mmadụ nọgide otú ọ nọ.+ 27 È kekọtawo gị na nwunye?+ Kwụsị ịchọ ntọhapụ.+ À tọpụwo gị n’ebe nwunye nọ? Kwụsị ịchọ nwunye. 28 Ma a sịgodị na ị lụọ di ma ọ bụ nwunye, i meghị mmehie ọ bụla.+ Ọ bụrụkwa na onye na-amaghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị alụọ di ma ọ bụ nwunye, onye dị otú ahụ emeghị mmehie ọ bụla. Otú ọ dị, ndị lụrụ ga-enwe mkpagbu n’anụ ahụ́ ha.+ Ma m na-azọ unu. 29 Ụmụnna m, ana m ekwukwa na oge fọdụrụ dị ntakịrị.+ Site ugbu a gaa n’ihu, ka ndị nwere nwunye dịrị ka à ga-asị na ọ dịghị nke ha nwere,+ 30 ka ndị na-akwa ákwá dịrịkwa ka ndị na-adịghị akwa, ka ndị na-aṅụrị ọṅụ dịrịkwa ka ndị na-adịghị aṅụrị, ka ndị na-azụ ihe dịrịkwa ka ndị na-enweghị ihe, 31 ka ndị ji ụwa eme ihe dịrịkwa+ ka ndị na-adịghị eji ya eme ihe n’uju; n’ihi na ọnọdụ ụwa a na-agbanwe agbanwe.+ 32 N’ezie, achọrọ m ka unu ghara ichegbu onwe unu.+ Onye na-alụghị nwaanyị na-echegbu onwe ya maka ihe Onyenwe anyị, otú ọ pụrụ isi mee ihe dị Onyenwe anyị mma. 33 Ma onye lụrụ nwaanyị na-echegbu onwe ya+ maka ihe nke ụwa, otú ọ pụrụ isi mee ihe dị nwunye ya mma,+ 34 ọ bụkwa onye e kewara ekewa. Nwaanyị na-alụghị di, nke bụkwa nwaanyị na-amaghị nwoke, na-echegbu onwe ya maka ihe Onyenwe anyị,+ ka o wee dị nsọ ma n’ahụ́ ya ma ná mmụọ ya. Otú ọ dị, nwaanyị lụrụ di na-echegbu onwe ya maka ihe nke ụwa, otú ọ pụrụ isi mee ihe dị di ya mma.+ 35 Ma ana m ekwu ihe a maka ọdịmma unu, ọ bụghị ka m kee unu agbụ, kama ọ bụ ka m kpalie unu ime ihe kwesịrị ekwesị,+ kpaliekwa unu ijere Onyenwe anyị ozi mgbe niile n’enweghị ndọpụ uche.+ 36 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla echee na ya na-akpa àgwà na-ekwesịghị ekwesị mgbe ọ bụ onye na-amaghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị,+ ọ bụrụ na onye ahụ agafewo oge ntoju ntorobịa, ọ bụrụkwa na ọ bụ ihe a ka o kwesịrị ime, ya mee ihe ọ chọrọ; o mehieghị. Ka ha lụọ di ma ọ bụ nwunye.+ 37 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ekpebie n’obi ya, ọ bụrụkwa na ọ dịghị ya mkpa, kama o nwere ike ịchịkwa ọchịchọ ya, ya ekpebiekwa n’ime obi ya na ya ga-anọgide n’amaghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị, ọ ga-eme nke ọma.+ 38 N’ihi ya, onye lụrụ di ma ọ bụ nwunye wee ghara ịbụkwa onye na-amaghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị mere nke ọma,+ ma onye nọgidere otú ọ nọ wee ghara ịlụ di ma ọ bụ nwunye ga-eme nke ọma karị.+ 39 Iwu ji nwunye n’oge niile di ya dị ndụ.+ Ma ọ bụrụ na di ya adaa n’ụra ọnwụ, o nweere onwe ya ịlụ onye ọ chọrọ, naanị n’ime Onyenwe anyị.+ 40 Ma obi ga-adị ya ụtọ karị+ ma ọ bụrụ na ọ nọrọ otú ọ nọ, dị ka m si chee. Echere m n’ezie na m nwekwara mmụọ Chineke.+